Ny Fambolena sy ny Fiompiana Vokatra Galvanisé
1-Lalao kokoa sy milamina kokoa ny fizotran'ny fanorenana. Ny welding rehetra dia atao ao amin'ny orinasa.
2- Rafitra vy bolted ihany amin'ny dingan'ny fanorenana. Tsy mila manao welding na manapaka amin'ny toerana.
3- Ny tanjaka sy ny faharetan'ny fametahana vy miaraka amin'ny tanjaky ny vokatra kely indrindra amin'ny 345MPA ary ny tanjaky ny tanjaky ny 1.5MPa ho an'ny fitaovana fototra rehetra ho an'ny fantsona sy ny purlins. tanjaky ny 345MPA ary tanjaky ny tensile kely indrindra amin'ny 320MPA. zink coating ny 275 grama isaky ny metatra toradroa galvanized na AZ150 na tsara kokoa.
Ny andry fiambenana (andry fiambenana), ho toy ny fanohanana ny fiambenana arabe, amin'ny ankapobeny dia mamaritra ny fahombiazan'ny fiambenana raha misy fifandonana. Ny toby fiambenana atolotray dia natao tsara sy vita amin'ny vy avo lenta toy ny Q235, Q345 ary Q355, na araka izay ilainao. Ankoatra izany, dia miavaka amin'ny fiainana fanompoana lava noho ny harafesiny sy ny harafesiny toetra fanoherana, izay avy amin'ny ambony zinc na PVC coating.
Manamboatra kojakoja guardrail avo lenta izahay, ao anatin'izany ny satroka, bolt, voanjo ary bloc offset, ho mora ny fametrahana.
Ny lovia tariby galvanised dia vita amin'ny takelaka vy mihodinkodina mangatsiaka miaraka amin'ny galvanized mafana, ary misy harato, slot, lovia na tohatra karazana fizarana mahitsy, miondrika, tee, singa efatra, ary sandry bracket (brackets sandry), hanger, sns., izay mahaforona ny anarana feno ny rafitra ara-drafitra amin'ny fifandraisana akaiky hanohana tariby.
Ny maritrano substation dia azo zaraina ho:
Tobim-piantsonana lehibe, fiantsonan'ny terminal.
Tobim-piantsonana Boost, tobim-piantsonana midina.
Vokatra vita amin'ny galvanised munisipaly fanorenana
Araka ny efa fantatry ny rehetra, ny felam-boninkazo monisipaly dia ampiasaina indrindra eny an-dalana, fantatra amin'ny anarana hoe guardrail, mba hiarovana ny fiarovana ny mpandeha an-tongotra sy ny fiara mitondra fiara.